Aza te ho deraina! • AoRaha
Finday maro no nopotehina sy nohosena tamin’ny fiaravy mpanao lalana, tamin’iny herinandro iny. Hosoka, hono, mantsy izy ireo sady tsy manara-dalàna satria tsy manana an’ilay code IMEI (International Mobile Equipment Identity), izay hahafantarana ireo finday tena izy. Nahabe resaka tao anatin’ny tambajotran-tserasera sosialy “Facebook” ity raharaha ity. Betsaka ireo mpiserasera no sorena, tamin’ilay fihetsika.
Ekena aloha fa tokony hisy fepetra raisina mihitsy manoloana ny tsy fanarahan-dalàna eto Madagasikara saingy mila dinihina kosa ny fomba fampiharana izany amin’ny lafiny sasany. Toa mila doka sy te ho deraina mantsy ireo tompon’andraikitra, tamin’ny famotehana ireo finday an’arivony. Midika ho fandatsana ny fahefa-mividin’ny Malagasy, izay tsy mahatakatra finday avo lenta sy manaraka ny teknolojia maoderina izany. Fitiavana te hisehoseho fotsiny ny an’ireo tompon’andraikitra. Mipetraka anefa ny ahiahy hoe, tena nopotehina daholo tokoa ve izy rehetra sa ny sasantsasany sy izay natao ho hitam-bahoaka ihany?
Mba ampahafirin’ny manara-dalàna ireo olona ireo? Farafaharatsiny tokony haverina tany amin’izay olona nandefa azy any ivelany tany ireo finday. Mahavariana ihany koa hoe nahoana no tafiditra soa aman-tsara tao amin’ny Fadintseranana ireo finday hosoka sy tsy ara-dalàna ireo nefa avy eo nohitsahina tamin’ny fiaravy mpanao lalana indray? Izay fatra mpanara-dalàna amintsika mianakavy no aoka hitora-bato ny vahoaka izay tsy faly tamin’io fihetsika mamohehatra io. Ary rehefa mamoaka lalàna ihany moa dia ampiharo hatramin’ny farany fa tsy atao toy ny afo-mololo tahaka ny mahazatra e! Amin’ny voalohany ihany no be fiavy fa rehefa avy eo miverina amin’ny gaboraraka ihany.
Fiarovana hentitra :: Mpitandro filaminana iray alina hahetsika amin’ny fandalovan’ny Papa François